Ahoana no ahaizako tena mahay yoga? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Torohevitra Yogo - vahaolana amin'ny
Torohevitra Yogo - vahaolana amin'ny
Ahoana no ahaizako tena mahay yoga?
Ampitomboy nyny yogaFomba fanao: Yogis mizara ny toro-hevitra tsara indrindra azon'izy ireo
Hatanjaho ny hatotananao, na dia tsy manao izany aza ianaony yoga.ny yogaafaka manatsara ny hery iraisana, indrindra eo amin'ny hato-tanana.
anaovan'ireony yoga-akanjo manokana.
Mihinàna hazavana alohan'ny fotoam-pianarana.
Misotroa rano misy tsiro.
Atsaharo ny sainao.
Halalino ireo anarana pose.
iraika ambin'ny folo . 2015.
Nizara ny zavatra niainako voalohany tamin'ny yoga, tsy dia tiako loatra izany ary nanapa-kevitra nandritra ny fotoana ela aho alohan'ny hanombohana indray. Ireto no zavatra tiako ho fantatra, angamba angamba niraikitra fotsiny tamin'io aho ary nanohy fa tsy niala sasatra ary nijanona niandry ny hanombohany indray.
Raha tokony hijerena ny vatako aho dia jereo ny vatako ao anaty paozy rehefa maneho ohatra aho fa hiteny kosa aho hoe mihainoa tsara kokoa ny torolalako satria tsy lafatra ny vatako ary tsy mifanaraka tsara ary ny vatako dia mbola miasa hatrany. manovaova tanjaka bebe kokoa Manana fahaleovan-tena kely ary manana tanjaka vitsivitsy aho saingy ela be vao tonga tany ary ho ela vao ho lasa tsara kokoa noho izany fantatro hoe inona no ilain'ny vatana hijanonana ho azo antoka ary hahazo ilay mametraka ny tsara sy ny mety ary mieritreritra ny zavatra lazaiko aho rehefa mampianatra anao amin'ny yoga pose yoga ho an'ny olona rehetra, rehefa manome kilasy yoga aho, hetsika yoga asana dia nametraka eritreritra betsaka tao aho ary ny lalana dia namboarina tsara mba ho anao Ny Yoga Pose tsara indrindra dia afaka mahatratra ny posy yoga tsara indrindra, ny vatako dia mety tsy ho toy ny fijerin'ny vatanao ny fotoana ary mety tsara izany, izay mitondra ahy kely amin'ny teboka manaraka. Fa tazomy ho azy vetivety.
Ny teboka iray hafa dia ny fahitako mpianatra marobe rehefa mampianatra kilasy fiainana. Be loatra ny lohan'izy ireo ao an-dohany, azoko atao ny mijery olona mivantana amin'ny fananganana ny tanako havia, ary azoko lazaina hoe atsangano ny sandrinao ankavanana. Izy ireo dia mifantoka fotsiny amin'ny zava-mitranga ao an-dohany ary azoko atao ny mamerina an'io fehezanteny io, mampiakatra ny tananao ankavanana, mampiakatra ny tananao ankavanana, mampiakatra ny sandrinao ankavanana, ary mbola miaraka amin'ny sandrinao ankavia eo ambonin'ny lohany izy io mahafinaritra ahy ihany koa.
Ao an-dohantsika foana isika ary mifantoka amin'izay mitranga ao an-dohantsika. Mifantoka be amin'ny zavatra hafa izahay, rehefa ao am-pianarana yoga dia mila mihaino kely kokoa ny torolalan'ny mpampianatra yoga Izahay rehetra dia manao an'io toa ny nolazaiko hoe manao an'io aho rehefa mpianatra ao amin'ny kilasy, fa tena zava-dehibe, indrindra rehefa vao manomboka yoga ianao. Ny fianarana fotsiny ny pose dia hanokatra ny sofinao ary hihaino tsara ny torolalan'ny mpampianatra yoga anao.
Ny tendro faharoa dia ny tsy mitsara ny paozy amin'ny endriny, mijery paozy ary milaza fa mafy loatra izany. Ary tsy hanao an'izany mihitsy aho, na afaka mijery pose ianao ary milaza fa mora be izany. Andao hanombohana vonona aho, ny iray hafa toa mora loatra. Fa ny pose dia mety hamitaka ary raha ny fantatsika rehetra, ny fehezan-teny dia tsy mitsara boky amin'ny fonony, toy izany koa amin'ny pose yoga, aza mitsara pose yoga. ny fisehoany, indrindra ny fijeriny ny fomba fijeriny ny vatan'olon-kafa dia samy hafa tanteraka aminao, na amin'ny sary iray mety an-tserasera na anaty boky ianao, dia tsy dia marina momba ny anatomia matetika ny sary, ary matetika ny vatan'ny olon-kafa toa anao.
matory ao amin'ny fandroana
Etsy andanin'izany, aza mitsara pose yoga. Toa izao, andramo ho anao, afaka mijery fampianarana amin'ny Internet ianao, ary afaka mijery boky, torolàlana momba ny boky, ary manandrana azy, azonao atao ny mangataka mpampianatra yoga hampianatra anao ny paozy ary manandrana ho anao izany alohan'ny hanaovana tombana fanombanana izay mitondra ahy amin'ny hevitra manaraka? Inona ny tendron'ny laharana fahatelo ka tsy tianao ny pose yoga, izany hoe mila izany ohatra ianao? Misy ny pose antsoina hoe King Arthur. Niresaka momba izany tao amin'ny Instagram aho fotoana vitsy lasa izay, misy pose antsoina hoe King Arthur izay nataoko lesona momba ity fantsona ity Taona vitsivitsy lasa izay dia fatra lalina sy lalina amin'ny quad ary mipetraka eo aminy tontolo andro, indrindra fa izaho izao mipetraha matetika amin'ny solosainako, tery be ny quad-ko sy ny valahako.
Tena henjana amiko ny Mpanjaka Arthur, ary tsy tiako ny manao an'ity sary ity. Zavatra atahorako izy io ary tsy dia ataoko matetika araka ny tokony ho izy, saingy fantatro fa izao no tsapako momba an'ity pose ity, fantatro ihany koa fa manohitra izany, tena mila ahy indrindra aho, zavatra ity mila ny vatako, mila miovaova kokoa sy misokatra ary mora kokoa amin'ny valahako ny vatako ary mikatona aho Ka tena manohitra izany, izay tokony hataoko matetika kokoa. Ka ohatra iray fotsiny izany ny tsirairay dia tery amin'ny toerana samy hafa ny olona mora miovaova amin'ny toerana samihafa Ka lasa atody ianao dia mety ho mora kokoa aminao ny toerana sasany, amin'ny toerana sasany dia ho somary sarotra kokoa hoy aho ireo manahirana kokoa no mila ampiharina indrindra amin'ny ankapobeny ary mety ho izy ireo no toerana tianao indrindra efa zatra posiko hatrizay.
Ampiharo amin'ny sary am-piandohana tiako ny manampy hetsika sasany, indrindra ny sarin'ady dia manampy fanovana aho ary manampy hetsika mavitrika mba hahamora kokoa ny fitazonana na fanovana ireo sary fa rehefa mandroso kely ianao dia mety ilay vao manomboka na ambaratonga antonony mila zatra mihazona ny pose mandritra ny fotoana maharitra. Noho izany, raha vao manomboka ianao dia tsara ny mitandrina amin'ny fotoana hanombohana pose yoga, andramo ny faharetana ary tazomy kely kokoa noho ny tianao ho afa-po amin'ny tenanao mifantoka amin'ny fofonainao maka ny lavitra ny saina fa tsy mahazo aina na reraka ianao, ary mety manandrana mifantoka amin'ny fofonainao fa tsy. Lafiny iray hafa amin'ity toro-hevitra ity ny faharetana amin'ny tenanao raha ny amin'ny fipetrahana yoga sasany, ohatra, indraindray dia sosotra isika, milaza fa manandrana manao tanan-tanana na fehiloha, na iray amin'ireo inversion na tendrony ambany kokoa? Ary mety ho kivy isika satria tsy tonga haingana araka izay tadiavintsika izy ireo hoy aho hoe somary mahareta kely kokoa amin'ny tenanao fantatro fa mahasosotra izany ary samy hafa ny vatana rehetra Fa mety hitranga ve izany? Elaela ianao hahavita an'ity paozy ity ary tianao izany, saingy hoy aho hoe mahareta, manaova fanazaran-tena ary mahareta amin'ny tenanao ary aza maika hiroso amin'ny zavatra hafa satria mety hiteraka ratra izany ka te-ho voaro ianao pose yoga? Angamba raha manandrana manao tanan-tanana ianao dia mety tsy ho vonona tanteraka hijoro eo an-dohanao ianao ary hitondra ny lanjanao rehetra amin'ny tananao sy ny sandanao ihany, mila manao tanjaka ambony kokoa amin'ny vatana ianao ary manomana fiomanana bebe kokoa amin'ny farany. ahatongavana amin'ity paozy ity. Miditra ao aminy fotsiny ve ianao ary manam-paharetana bebe kokoa amin'ny tenanao mba hahavitanao azy amin'ny farany? Mahareta fotsiny ary ny toro-hevitra dimy farany hataoko ho an'ireo vao manomboka yoga dia ny manomboka ao an-trano - samy hafa ny olona rehetra, fa raha vaovao ianao amin'ny yoga, dia azo inoana fa somary matoky tena ianao fa mety tsy te hiditra amin'ny yoga vondrona lehibe. eo noho eo - Ny fanombohana ny Mazava ho azy fa raha tsy fantatrao ny pose nefa mampihatra yoga ao an-trano dia mety safidy lehibe.
Fomba iray hafa anaovana izany raha tsy azonao antoka ny mandray lesona yoga manokana - ny ankamaroan'ny studio yoga dia manome lesona ho an'ny mpampianatra azy ireo amin'ny fikarohana Google tsotra, ny lesona tsy miankina iray dia toerana tsara hanombohana raha afaka izany ianao. Mety ho lafo kokoa izy ireo, ka izany no antony ahafahanao manao fanazaran-tena ao an-trano miaraka amin'ireo lahatsoratra yoga ao amin'ny YouTube na koa fandaharana yoga an-tserasera na fomba tsara hanombohana safidy somary mora kokoa koa, antenaiko fa nankafizinao ireo torohevitra 5 ireo ary afaka nanao izany aho diniho lalindalina kokoa ireo lohahevitra rehetra noresahiko saingy izany dia ho lahatsoratra lava be dia be, ka raha ianao no tiako ho lalindalina kokoa amin'ireo lohahevitra tsirairay hodinihiko ato amin'ity lahatsoratra ity. Ampahafantaro ahy amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambany ary hiezaka mafy aho hanao an'ity lahatsoratra ity ho anao.
Misaotra anao nitady. Manantena aho fa nankafizinao ity lahatsoratra ity, raha tianao ny manome azy ny ankihibe dia avelao amiko ny fanontaniana rehetra ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ary aza adino ny misoratra anarana amin'ny kilasy yoga roa maimaim-poana isan-kerinandro amin'ity fantsona ity na koa torohevitra yoga maro hafa manampy torohevitra yoga ho an'ny kilasy yoga maimaimpoana hijerena maimaim-poana, chriskayoga.com ary afaka manaraka ahy amin'ny instagram ianao amin'ny fanavaozana ny yoga isan'andro fanentanana fiainana salama ao ambadiky ny sehatra ity fantsona ity ihany koa amin'ny instagram @ chriskayoga.
Misaotra indrindra anao. Mandrapihaona amin'ny manaraka ve ianao vao manomboka yoga? Te hanana fototra mafy orina amin'ny fanazaran-tenanao yoga ve ianao? Te hianatra fomba mahomby ianao hampidirana yoga bebe kokoa amin'ny fiainanao isan'andro, raha izany. Azonao atao ny mianatra izany rehetra izany sy bebe kokoa amin'ny programa kitapom-bokiko yoga.
fromazy trano bongony alohan'ny fampiofanana
Ity programa ity dia fitaovan'ny yoga anao manokana izay hanampy anao hahatakatra ny yoga amin'ny ambaratonga lalindalina kokoa ary hahazo betsaka kokoa amin'ny fanazaran-tenanao yoga. Tsidiho ny Chriskayoga.com/yoga-starter-kit raha te hahalala bebe kokoa.
Inona avy ireo torohevitra mahasoa ho an'ireo vao manomboka yoga?
Torohevitra ambony ho an'ireo vao manomboka amin'ny yoga
Mitadiava ayoga tsarampampianatra.
Hajao ny fahendrena anaty sy fetran'ny vatanao.
Aza mampitaha ny tenanao amin'ny hafa.
Manana fahatsapana vazivazy.
Mihinana sy misotro aryny yoga.
Manaova akanjo marevaka (izay mijanona eo) ​​...
Ataovy matetika ny fampiharana.
Ampy ve ny yoga 20 minitra isan'andro?
Fandinihana iray hafa momba ny olona 700 mahery no nahita fa 12 fotsiny ny fampiharanaminitra yogapose koaisan'androna ny hafa rehetraandronanatsara ny fahasalaman'ny taolana. Ary fanadihadiana kely hafa no nahita an'izanyYoga 20 minfanatsarana ny fifantohana sy ny fitadidiana miasa.
Teo anelanelan'ny taonjato voalohany sy faha-5 taorian'i JK, ny olon-kendry hindoa Patañjali dia nanomboka nanoratra ireo fomban-drazana taloha sy misaintsaina natao manerana an'i India. Noraketiny ireo teknika izay efa antitra toa ny sivilizasiana indiana ao anaty boky 196, ny Yoga Sutras. Zioga 'na mitazona ny saina tsy hifantoka amin'ny zavatra ivelany mba hahatratrarana ny fahatsiarovan-tena madio.
Rehefa nandeha ny fotoana, ny singa ara-batana avy amin'ny gymnastika sy ny tolona dia nampidirina ho yoga. Misy fomba isan-karazany amin'ny yoga maoderina ankehitriny - na dia mbola mitazona singa fototra telo amin'ny fampiharana an'i Patañjali aza ny ankamaroany: fihetsika, fanazaran-tena ary fikajiana ara-panahy. Ity fifangaroana fanazaran-tena ara-batana sy ara-tsaina ity dia heverina ho manana tombony ara-pahasalamana tsy manam-paharoa ho an'ny fahasalamana ara-tsaina.
Fa inona no asehon'ny fandinihana ankehitriny momba ny tombotsoan'ity lovantsofina taloha ity? Na eo aza ny fiezahan'ny mpikaroka maro, sarotra ny manao fanambarana mivaingana momba ny tombotsoan'ny yoga. Ny fitambaran'ny hetsika tsy manam-paharoa dia manasarotra ny mamaritra izay singa manana tombony manokana amin'ny fahasalamana. Ary koa, ny fandalinana yoga dia matetika misy santionany kely tsy misy fahasamihafana, ary ny fiankinan-doha mavesatra amin'ny tatitra ataon'ny tena dia mahatonga ny valiny ho voafintina.
Na izany aza, misy ny tombontsoa ara-pahasalamana izay manana fanohanana ara-tsiansa mafy orina kokoa noho ny hafa. Andao hanomboka amin'ny fahalemena sy ny tanjaka. Rehefa manodinkodina ny vatanao ho amin'ny fiovan'ny yoga ianao dia misy vondrona hozatra maromaro mivelatra.
Mandritra ny fotoana fohy, ny fanitarana dia afaka manova ny atin'ny rano amin'ireo hozatra, ligam-po ary tendon ireo mba hahatonga azy ireo ho matevina kokoa. Rehefa mandeha ny fotoana, ny fihenan-tsakafo tsy tapaka dia manentana ny sela misy tahony, izay avy eo dia miavaka ho sela vaovao hozatra sy sela hafa izay mamorona collagen elastika. Ny famelarana matetika koa dia mampihena ny hozatra mihetsiketsika voajanahary amin'ny vatana, manatsara ny fandeferanao amin'ny fanaintainana ho an'ny flexi Tsy hitan'ny mpikaroka fa misy karazana yoga manatsara ny fahafaha-manao mihoatra ny iray hafa, noho izany dia tsy mazava ny fitaoman'ny fihetsika sasany.
Fa toy ny fanazaran-tena malefaka hafa, ny yoga dia manatsara ny fahasalamana sy ny fahafaha-mihetsika amin'ny vahoaka salama, ary voaporofo fa fitaovana mahomby amin'ny fitsaboana. Ao amin'ny fandalinana ireo marary manana karazan'aretina musculoskeletal isan-karazany, ny yoga dia nanampy betsaka kokoa tamin'ny fampihenana ny fanaintainana sy ny fanatsarana ny fivezivezena noho ny endrika fampihetseham-batana mora tohina amin'ny toe-javatra sarotra azo tsaboina toy ny fanaintainan'ny lamosina ambany, rheumatoid arthritis, ary osteoporosis. Ny fifangaroan'ny fampihetseham-batana sy ny fifohana rivotra mifehy ny yoga dia naseho fa fitsaboana toy izany koa amin'ny fahasalaman'ny havokavoka.
Ny aretin'ny havokavoka toy ny bronchitis mitaiza, ny emfisema ary ny sohika dia mampihena ny lalan-kaleha entin'ny oxygen raha osaina kosa ilay membrane mitondra oksizenina ao anaty ra. Fa ny fampihetseham-pofonaina toy izany amin'ny yoga dia mampihena ny hozatra manenjana ireo andalan-teny ireo ary manatsara ny fiparitahan'ny oxygen. Ny fampitomboana ny habetsan'ny ôksizenina ao anaty ra dia manampy indrindra an'ireo manana hozatra malemy am-po izay manana olana amin'ny fahazoana oksizena ampy manodidina ny vatana.
Ary ho an'ireo manana fo salama, ity fampihetseham-batana ity dia afaka mampihena ny tosidra sy mampihena ny risika mety hitrangan'ny aretim-po kardia. Ny tombony ankafizin'ny yoga indrindra angamba no sarotra indrindra porofoina: ny vokany ara-tsaina. Na eo aza ny fifandraisana efa ela teo amin'ny yoga sy ny fahasalamana ara-tsaina, dia tsy misy porofo mivaingana momba ny fiantraikan'io fomba io amin'ny fahasalamana ara-tsaina.
Ny iray amin'ireo fitakiana lehibe indrindra dia ny hoe manatsara ny soritr'aretin'ny alahelo sy ny fikorontanan-tsaina ny yoga. Satria samy hafa be ny famaritana ireo aretina ireo, ary koa ny niandohany sy ny hamafiny, dia sarotra ny mamaritra ny vokatry ny yoga. Na izany aza, misy porofo vitsivitsy fa ny yoga dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny soritr'aretin'ny fihenjanana, ary koa ny fisaintsainana na fialan-tsasatra.
Ny fikarohana momba ny vokatry ny yoga dia mbola hotohizako ihany. Amin'ny ho avy dia ilaina ny fandalinana fanadihadiana lehibe kokoa miaraka amin'ireo mpandray anjara samihafa hizaha ny vokatry ny Yoga izay mety handrefesana ny aretim-po, ny tahan'ny homamiadana, ny fiasan'ny kognitika ary maro hafa. misaintsaina ary miala sasatra.
Inona no tsy tokony hataonao alohan'ny yoga?
Toy izany koa, torohevitra ianao mba tsy hanao izanymandrayfandroana farafahakeliny 2 oraalohan'nynyny yogafivoriana. Antony iray hafa hisorohana ny fandroanaalohan'ny yogadia ny mahita hoeny yogamanao amin'ny vatantsika. sasanyny yogamamokatra hafanana ao amin'ny vatana ny pose raha ny hafa kosa mampatsiatsiaka ny vatanao mba hitondra fiovana mahasoa.iraika amby roapolo . 2017.
Afaka mahay yoga ve ianao?
Tsy misy refy ivelany amin'ny maha-izy azytsaraamin'nyny yoga. Ao anatiny tanteraka ary mifantoka amin'ny dingana. Miaraka amin'izany ho fari-pitsipika, na iza na iza tsy mijery ny fari-piainanyafakaho tenamahay yogaamin'ny andro iray voatondro.
tombontsoa avy amin'ny menaka zavokà
Afaka mahay yoga ve ianao ao an-trano?
Yoga dia mety hovita amin'nyan-trano, fa indrindra ho an'ny vao manomboka dia zava-dehibe ny manandrana kilasy iray na roa ampianarin'ny mpampianatra efa za-draharaha, amin'ny toerana tsy miankina na vondrona,hoazo antokaianareomanao nyny yogafanazaran-tena soa aman-tsara.
Inona no fotoana mety indrindra anaovana yoga?
Rahoviana nomanao Yoga? Ilayfotoana tsara indrindra hampiharana yogano zavatra voalohany amin'ny maraina alohan'ny sakafo maraina. Rehefa mifoha, esory ny tsinainy, mandro raha irinao, atombohy amin'ny fanjakan'nyny yogafomba fanao. Ny faharoa mitondra tenafotoanadia harivariva hariva, manodidina ny filentehan'ny masoandro.
Sarotra ho an'ny vao manomboka ve ny yoga?
Ny mahazo aina mahazo anaony yogany asanas dia fahita matetika, indrindra raha mbola tsy dia mahay mandanjalanja ianao na mbola tsy tena hainao loatra amin'ireo pose ireo. Ny pose sasany dia mety hahatsapa ho voajanahary, fa ny hafa kosa bebe kokoamampihaika. Indray,ny yogatsy mora. Ny vokatry nyny yogano mahatonga ny mpianatra hiverina hiverina bebe kokoa.04.26.2017
Mampihena ny tavy amin'ny kibo ve ny yoga?
manaony yogaMety hanampy anao hampivelatra ny tonon'ny hozatra sy hanatsara ny metabolisma. Mandritra ny famerenana amin'ny laoninyny yogaTsy karazana vatana manokanany yoga, mbola manampy amin'ny fihenan-danja izany. Ny fandinihana iray dia nahita izany famerenana amin'ny laoniny izanyny yogadia nahomby tamin'ny fanampiana ny vehivavy matavy loatra hampihena ny lanjany, ao anatin'izanytavy kibo.
Be loatra ve ny yoga 2 ora?
Ny isa tsara indrindra dia eo anelanelan'ny telo ka hatramin'ny eninany yogafivoriana isan-kerinandro (farafaharatsiny 1oratsirairay), arakaraka ny fombabelanja tianao ho very ary haingana dia haingana. Ny olona sasany dia mora miovaova tanteraka. Ho azy ireo, na iray narOAny 1-yoga orakilasy isan-kerinandro dia ampy hitazomana ny vatan'ny vatana.
Inona no fomba tsara indrindra hanombohana amin'ny yoga?
Manomboha amin'ny yoga Tadiavo ny fifantohana amin'ny fanazaran-tenanao yoga. Tandremo fa tsy misy ny atao hoe yoga 'tsara' na 'marina'. Angony izay fitaovana mety tianao hampiharina. Manaova akanjo mifoka rivotra izay ahafahanao mihetsika. Mitadiava toerana mampihetsi-po hanaovana fampiharana. Mafana amin'ny fiarahabana amin'ny masoandro. Mianara asana yoga vitsivitsy. Mifantoha amin'ny fofonainao.
Iza no fomba tsara indrindra anaovana yoga yoga?
Ny làlan'ny yoga samy hafa dia manasongadina ny fomba sy teknika samihafa saingy amin'ny farany dia mitarika tanjona iray amin'ny fampiraisana sy fahazavana. Hatha Yoga dia mahatratra ny firaisana amin'ny vatana-saina-fanahy amin'ny alàlan'ny fampiharana asanas (fihetsika yoga), pranayama (fifohana rivotra yoga), mudra (fihetsika amin'ny vatana) ary shatkarma (fanadiovana anatiny).
Ahoana no ahatongavan'i Yogo hijoro ho an'ny fiarovana ny mpandeha?
YOGO dia miaro ny fiarovana ny mpandeha; laharam-pahamehana indrindra ho anay ny fiantohana ny fahasalaman'ny mpandeha. Noho izany, nitondra ny fenitry ny fiarovana ny mpandeha amin'ny lafiny iray vaovao, i YOGO dia nanangana singa fandefasana finday voaofana manokana raha misy tranga maika.